निर्दोष भनिएका दिलीप सिँहले बलात्कार र हत्या स्वीकारेको गोप्य भिडियो बाहिरियो (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
निर्दोष भनिएका दिलीप सिँहले बलात्कार र हत्या स्वीकारेको गोप्य भिडियो बाहिरियो (भिडियो सहित)
काठमाडौं । गत साउन १२ गते बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएको कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा अझैँ पत्ता लागेको छैन। यो बिचमा कञ्चनपुर प्रहरीले दोषी भनी सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह बिष्ट डिएनए नमिलेपछि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट निर्दोष साबित भएर छुटिसकेका छन्।
साथै आशंका गरिएका एसपी डिल्लीराज बिष्ट उनका छोरा किरण बिष्ट र आयुश बिष्टको समेत डिएनए म्याच भएको छैन। अहिलेसम्म सरकारले बनाएको उच्च स्तरिय छानबिन समिति, नेपाल प्रहरीले निर्माण गरेको उच्च अधिकारी संग्लन छानबिन समितिबाट केहि पनि बाहिर आउन सकेको छैन।
तर घटनाको ६४ दिनपछि डिएनए म्याच नहुँदा निर्दोष सावित भएका दिलीप सिहं बिष्टले आँफुले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेको भिडियो सार्वजनि भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यो भिडियोमा दिलिप सिंह बिष्टले गरेको कुराकानीमा आफुले नै बलात्कार गरेर हत्या गरेको बताएका छन्। हेर्नुहोस् भिडियो सहित :
Prevनेपाल आईडलको स्टेजमा यसरी हँसाए दिपक राज र माग्ने बुढाले (भिडियो सहित)
Nextपत्याउनै नसकिने गरी आज यसरी एकाएक ह्वात्तै बढ्यो डलरको भाउ, साउदी, कतार, दूवईको भाऊ यस्तो छ।
मुम्बईविरुद्ध दिल्ली: पहिलो ओभरमै सन्दिपले लिए विकेट,सूर्यकुमार आउट
जिवेश गुरुङले दिए मानʼसिक याʼतना, करियर सिध्याउने धम्कीदेखि आफुसँग विवाह गर्न दबाʼब गरेको भन्दै मिडियामा (भिडियो सहित)
ग्याष्टिक कस्तो रोग हो ? कसरी बच्न सकिन्छ ? ग्याष्टिक भएको कसरी थाहा पाउने ? हेर्नूहोस
भ्वा’ईसका कोच आस्था राउतको स्वर आचल शर्माको अभिनयमा ‘नाकैमा फुली’ सार्वजनीक (भिडियो हेर्नुहोस्)